August 28, 2019 - Myitter
စသည့်ဝိတ်သုံးပြီးစကားဆိုခဲ့သူကိုဥပဒေဘောင်တွင်းကပြန်လှန်နှိမ်ကွပ်ခဲ့သော ရဲတယောက် ။ ။
August 28, 2019 Myitter 0
ငါ ! ဗိုလ်မှူးအငြိမ်းစားကွ ။နောက်ခန်းထဲမှာ ဒုဝန်ကြီးအငြိမ်းစားပါတယ် ။ စသည့်ဝိတ်သုံးပြီးစကားဆိုခဲ့သူကိုဥပဒေဘောင်တွင်းကပြန်လှန်နှိမ်ကွပ်ခဲ့သော ရဲတယောက် ။ ။ “ဟေ့ကောင် ငါ ဗိုလ်မှူးအငြိမ်းစားနော်” တဲ့ ကြည့် ဘာမှတောင်မပြောရသေးဘူးကားလေးတားမိတာနဲ့တန်းပြောတာ ငါဗိုလ်မှူးအငြိ်မ်းစားနော်တဲ့ ဝိတ်သုံးတဲ့သဘောလား ခြောက်လှန့်လိုက်တဲ့သဘောလားတော့မသိ x”ဟုတ်ကဲ့ ဗိုလ်မှူးခင်ဗျာ လိုင်စင်နဲ့ဝှီးတတ်လေး ပြပေးပါဗျ” ထိုလူကအမောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပြတယ် ဝှီးတတ်ကတော့မပါဘူးတဲ့ဝှီးတက်ပါမလာဘူးဆိုတော့ […]
” မြောက်ပိုင်း ၃ ဖွဲ့ကို ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ တရုတ်အတွက် အစိုးရရဲ့ တန်ပြန်တိုက်စစ်”
” မြောက်ပိုင်း ၃ ဖွဲ့ကို ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ တရုတ်အတွက် အစိုးရရဲ့ တန်ပြန်တိုက်စစ်” တရုတ်ကတော့ အမေရိကန်ကို ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ ရပ်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါပီ။ တနည်းအားဖြင့် အလံဖြူထောင်လိုက်တာပါပဲ။ အမေရိကန်ရဲ့ အဖြေကိုတော့ မသိရသေးပါ။ အမေရိကန်နဲ့ မဟာမိတ်တွေဟာ တရုတ်ရဲ့ BRI ကို ဖြိုချဖို့ အကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ။ […]
” သင်စားသည့်အတိုင်းသင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်” မွေးမြူရေးကြက် သို့မဟုတ် ၄၅ ရက်သားအသားတိုးကြက် စားသုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အမေရိကန် အစားအစာနှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန၊ အမေရိကန်တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်များသုတေသန အဖွဲ့တို့ရဲ့ ရေးသားချက်များကများစွာစဉ်းစားစရာဖြစ်စေနေပါတယ်။ မွေးမြူရေးအသားတိုးကြက်(၄၅ ရက်သား)များတွင် အာဆင်းနစ် လို့ခေါ်သောစိန် အဆိပ်များကို ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိစစ်ဆေးတွေ့ရကြောင်း။ ထို စိန် အဆိပ်များမှာ လူလုပ်စိန် အဆိပ်များဖြစ်ကြပြီး […]
သူတို့နှစ်ယောက် လွှတ်တော်တွင် ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ …
သူတို့နှစ်ယောက် လွှတ်တော်တွင် ထိပ်တိုက်တွေ့ကြပြီ … “လက်ရှိ ၂၀၀၈ ခြေဥကြောင့် သမ္မတ ဦးထင်ကျော်၊ ဦးဝင်းမြင့် အစိုးရ၊ ယခုလွှတ်တော်နှင့် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌများ၊ လစာဆယ်သိန်းလစဉ်ရနေတဲ့ လွှတ်တော် အမတ်များ တည်ရှိနေတာကို မမေ့ကြဖို့ လိုပါတယ်” ဗိုလ်မှူးဒေါ်သူဇာရွှေ (တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်) “၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၊အခြေခံမူများအခန်း […]
တရုတ်ပြည်ထုတ် ကြက်သွန်ဖြူတွေကို လုံးဝ( လုံးဝ )စားသောက်ခြင်း မပြုကြဖို့ သတိပေး တားမြစ်ထားပါတယ်။
အစကမသိခဲ့ဘူး ရှမ်းဥလို့ ပဲထင်နေတာ ဒီလိုမှန်းသိရင် စားလည်းမစားဘူး ကျွေးလည်းမကျွေးခဲ့ပါဘူးကွယ်…… တရုတ်ပြည်ထုတ် ကြက်သွန်ဖြူတွေကို လုံးဝ( လုံးဝ )စားသောက်ခြင်း မပြုကြဖို့ သတိပေး တားမြစ်ထားပါတယ်။ မိမိတုိ့နီးစပ်ရာတွေအားလုံးကိုလည်း စကားလက်ဆောင် ကမ်းပေးကြပါ….။ တရုတ်ပြည်မှ တင်သွင်းသော ကြက်သွန်ဖြူဥကြီးတွေကိုဝယ်ယူစားသောက်ခြင်း မပြုလုပ်ကြပါရန်…. အကောင်းဆုံးကတော့ ကုိုယ့်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ကုို သုံးစွဲခြင်းပါတဲ့။ […]
လာမယ့် စက်တင်ဘာတွင် မုန်တိုင်း (၂) ကြိမ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့် ရာသီဥတုခြေနေ မိုးဇလ ထုတ်ပြန်
လာမယ့် စက်တင်ဘာတွင် မုန်တိုင်း (၂) ကြိမ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့် ရာသီဥတုခြေနေ မိုးဇလ ထုတ်ပြန် လာမယ့် စက်တင်ဘာလအတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ မုန်တိုင်း ၂ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မိုးလေဝသဌာနရဲ့ စက်တင်ဘာလ လပတ်မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်ရာမှာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ၃ ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး၊ […]
နောက်ဆုံခရီးကိုအံကြိတ်ပြီးကြည့် သူချန်ခဲ့တဲ့စစ်ကျောပိုးအိတ်လေးပြန်သယ်ပြီး ကလေး ၃ ယောက်ထားခဲ့ရတဲ့လားရှိုးကို အန္တရယ်ကင်းစွာပြန်ရောက်ဖို့ လောက်ကိုင်ကနေမမှောင်ခင် အမြန်ပြန်ထွက်ခဲ့ရတယ် ။
28 August 2019မှာ မိန်းမတု့်ိသားအမိတွေကိုခွဲသွားတာ10 နှစ်ပြည့်ပြီ။ ယောက်ျားရေဒီရက်တွေဆို မိန်း မရင်ထဲအလိုလိုနာကျင်နေတယ်။ တုိက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လားရှိုးနဲ့လောက်ကိုင်ကြားမှာလဲခုရက်တွေမငြိမ်းချမ်းတဲ့သတင်းတွေကြားရတော့ပိုသတိရတယ်။ကောင်းရာသုဂတိမှာရှိနေမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးသားပါ။ မိန်းမလဲ အားတင်းဆက်လျောက်လျှက်ပါယောက်ျားရေ။ လက်ကိုင်ပုဝါအပြာလေးးးအိမ်က ဗမှုး လက်နက်ကြီးထိပြီး ချက်ချင်းအသက်မထွက်ဘူးသူ့နား ရဲဘော်တွေရောက်သွားချိန် စကားတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးသူ့ဘောင်းဘီဘေးအိတ်ထဲ အမြဲထဲ့ထားတတ်တဲ့ လက်ကိုင်ပုဝါအပြာလေးကိုထုတ်ပြီး ဆရာကြီးတင်အေး မျက်နှာကိုတည့်တည့်ကြည့်ပြီးပေးခဲ့တယ် ။ပေးပြီးတာနဲ့ အသက်ထွက်သွားပဲ […]
တရွာလုံးနီးပါး ပြန်​​ပေါ်လာတဲ့ အင်​ဒိုင်းရွာ​ဟောင်း(ရေအောက်​ကျေးရွာ)
တရွာလုံးနီးပါး ပြန်​​ပေါ်လာတဲ့ အင်​ဒိုင်းရွာ​ဟောင်း(ရေအောက်​ကျေးရွာ) ရေကျလို့ တရွာလုံးနီးပါ ပြန်​​ပေါ်လာတဲ့ အင်​ဒိုင်းရွာ​ဟောင်းကို ဒီ​နေ့ အင်းဒိုင်းရွာက လူများနဲ့အတူ ​ရောက်​ရှိခဲ့ပါတယ်​။ အင်​ဒိုင်းရွာ​ဟောင်းဟာ ​ရေတွင်းများ အုတ်​ဂူများစာသင်​​ကျောင်း အုတ်​ခုံများ လမ်းမကြီးများနှင့်​ အခြား​သော.အမှတ်​အသားများဝါ အထင်းသာ​ပေါ်လို့​နေပါတယ်​။ ​ရေက ​အ​တော်​ကို ကျ​နေ​တော့ ရွာသူရွာသား​တွေက​တော့ သစ်​ငုတ်​​တွေကြည့်​ ခြံစည်းရိုး​တွေကြည့်​ပြီး သူတို့အိမ်​​နေရာကို […]
မြန်မာတို့ရဲ့အနီးကပ်ရန်သူ အယ်ဂျာဇီးယားသတင်းဌာနမှာရုပ်သံသတင်းဆောင်းပါးပါလာတယ်…… တရုတ်က…မြန်မာပျက်အောင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုလက်နက်ထုတ်ပေးတယ်…တဲ့ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာမူးယစ်ဆေးဝါးတွေအမြောက်အများထုတ်ခိုင်းတယ်…တဲ့ အကျင့်ပျက်မြန်မာအရာရှိကြီးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဈေးပေါပေါနဲ့ပြည်တွင်းထဲဖြန့်ဖြူးပေးတယ်…တဲ့ အဓိကမူးယစ်ရာဇာကြီးတွေကတရုတ်လူမျိုးတွေ…တဲ့ တရုတ်ဘဏ်တွေကမြန်မာ့မြေဝယ်ယူဖို့ဆိုရင်အတိုးမဲ့ငွေချေးပေးနေတာ…တဲ့ တရုတ်တွေပိုင်တဲ့မြေတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ညှိုးထိုးမလွဲရှိနေပြီတဲ့…… မြန်မာကိုမဟာဗျူဟာကျကျစနစ်တကျသိမ်းယူနေတာ…တဲ့ ကဲ…ရွှေမြန်မာတို့ရေ…အတိတ်ဆိုတာအနာဂတ်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်မှာလုပ်ဖို့ရာလမ်းပြမြေပုံဆိုတာအမြဲသတိရနေဖို့လိုပါတယ်…… ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ရန်သာ…… အရှင်တေဇနိယ(မန်းတောင်ခြေ)ံ unicode version မှနမြာတို့ရဲ့အနီးကပရြနသြူ အယဂြွာဇီးယားသတငြးဌာနမှာရုပသြံသတငြးဆောငြးပါးပါလာတယြ…… တရုတကြ…မှနမြာပကွအြောငတြိုငြးရငြးသားတှကေိုလကနြကထြုတပြေးတယြ…တဲ့ တိုငြးရငြးသားနယမြှတှမှေောမူးယစဆြေးဝါးတှအမှေောကအြမွားထုတခြိုငြးတယြ…တဲ့ အကငွ့ပြကွမြှနမြာအရာရှိကှီးတှနေဲ့ပေါငြးပှီးစွေးပေါပေါနဲ့ပှညတြှငြးထဲဖှနြ့ဖှူးပေးတယြ…တဲ့ အဓိကမူးယစရြာဇာကှီးတှကတေရုတလြူမွိုးတှေ…တဲ့ တရုတဘြဏတြှကမှေနမြာ့မှဝယေယြူဖို့ဆိုရငအြတိုးမဲ့ငှခွေေးပေးနတော…တဲ့ တရုတတြှပေိုငတြဲ့မှတှဟေောမှနမြာနိုငငြံမှာလကညြှိုးထိုးမလှဲရှိနပှေီတဲ့…… မှနမြာကိုမဟာဗွူဟာကကွစွနစတြကသွိမြးယူနတော…တဲ့ ကဲ…ရှမှနေမြာတို့ရေ…အတိတဆြိုတာအနာဂတအြတှကပြဈစုပျပနမြှာလုပဖြို့ရာလမြးပှမှပေုံဆိုတာအမှဲသတိရနဖေို့လိုပါတယြ…… ဆငခြှငသြုံးသပနြိုငရြနသြာ…… […]
ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများအားလုံး သိရှိလိုက်နာရမည့် အချက် (၁၈) ချက်ထုတ်ပြန်
ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများအားလုံးနှင့် အရာထမ်း၊အမှုထမ်း များအားလုံး သိရှိလိုက်နာရမည့်အချက် (၁၈) ချက်ထုတ်ပြန် သက်ဆိုင်ရာ အတန်းများအလိုက် အခန်းဆုံး စစ်ဆေးခြင်းများကို စုစုပေါင်း (၄)ကြိမ်သာ ဆောင်ရွက်ရန်(Remedial Education)ကို ဇူလိုင်လမှစတင်၍ နှစ်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်းမတိုင်မီအထိ စဉ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်တို့ပါဝင်… ၁။ မည်သည့်အခ ကြေးငွေမျှ ကောက်ခံခြင်း၊ လက်ခံခြင်းမပြုရ။ ၂။ […]